फिल्मी खबर Archives - Ratopress::रातो प्रेस
आँखा मुनी किन कालो घेरा बस्छ? त्यो कालो घेरालाइ हटाउने कसरी ? जान्नुहोस्
काठमाडौँ चैत्र ५ । हामी धेरै मानिसहरूको आँखाको तल्लो भागमा कालो धब्बा जस्तो घेरा बसेको हुन्छ । आँखा मुनिपट्टि कालो अब्बा घेरा बस्नु भनेको प्राय मानिसले निन्द्रा नपुगेर भन्ने गरेका हुन्छन् । तर विभिन्न...
यि ३ राशी हुने छोरी बुहारी हुन्छन् लक्ष्मी समान, घरलाई बनाउँछन् स्वर्ग : जानिराखौ
वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु भनेको महिला पुरुषको मिलन मात्र नभई दुई परिवारको मिलन पनि हो । पारिवारिक मेलमिलाप र वैवाहिक जीवन सुखमय भएमा मात्र जीवन सुखद रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ । आफ्नो जिवनमा आउने जीवन...
काठमान्डू : हेर्नुहोस पहेलो दात लाई पनि ५ मिनेटमै चम्काउने घरेलु तरिकाहरु ! दात हाम्रो सरिर को एक महत्वपुर्ण अंग हो दात ले गर्दा पनि हामीलाई धेरै प्रभाव पारेको हुन्छ पहेलो दात छ भने...
शास्त्रका अनुसार यी राशि भएका युवतीलाई श्रीमती/बुहारी बनाउँदा घरलाई बनाउँछन् स्वर्ग समान हेर्नुहोस !
काठमाडौँ। ज्योतिष विज्ञानमा हामी जो कोही धेरै विश्वास विश्वास गर्छौ । हुन पनि हो, ज्योतिष विज्ञान भनेको हाम्रो मानव जीवनमा जोडिएको एक शास्त्र हो । ज्योतिष शास्त्रले भनेका र भविष्यवाणी गरेका कतिपयकुराहरू मिलिरहेका छन्...
यि पाँच राशि भएका ब्यक्तीहरू जस्ले कहिले हार मान्दैनन् । बदल्छन् आफ्नो भाग्य हेर्नुहोस !
शास्त्रका अनुसार सबै गरी राशिहरू १२ वटा मात्र हुन्छन् । विश्वमा रहेका सम्पूर्ण मानिसहरूको राशि अनुसार उनीहरूको भाग्य, क्षमता र व्यवहार फरक फरक हुने गर्दछ । त्यसैमा पनि कोहीको बौधिक क्षमता धेरै हुन्छ भने...
एजेन्सी- मनाव सभ्यतालाई अगाडी बढाउनको लागि यौन सम्बन्धको छुट्टै महत्व हुने गर्छ। सन्तान प्राप्तिको लागि मानवले मात्र नभई हरेक जीवले यौन सम्बन्ध बनाउने गर्छन्। अहिले विश्वमा जनसंख्या बढेको कारण कम मात्र सन्तान जन्माउने चलन...
कुन महिना मा जन्मेको व्यक्ति कस्तो हुन्छ जानिराख्नुस ..? तपाइँ कुन महिना मा जन्मिनु भो ..?
कुन महिना मा जन्मेको व्यक्ति कस्तो हुन्छ जानिराख्नुस ..? तपाइँ कुन महिना मा जन्मिनु भो ..? शास्त्र का अनुसार कुन महिना मा जन्मिएको व्यक्ति को स्वभाब कस्तो हुने गर्दछा भनेर लेखिएको छ तपाइँ कुन...